လူတစ်ယောက်ကောင်းတာတွေဘယ်လောက်ပဲလုပ်လုပ်….မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်ရင်……….. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » လူတစ်ယောက်ကောင်းတာတွေဘယ်လောက်ပဲလုပ်လုပ်….မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်ရင်………..
Posted by ရှင်းသန့် နွယ် on Jun 25, 2012 in Copy/Paste | 24 comments
ရှင်းသန့်ခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာလေးက ဖတ်ဖူးတဲ့သူတွေရှိသလို မဖတ်ရသေးတဲ့လူတွေလဲရှိမယ်ထင်ပါတယ်
မောင်မြနှင့်မောင်လှဆိုပါတော့…… သူတို့နှစ်ယောက်ကဟိုဘက်ဒီဘက် မျက်နှာချင်းဆိုင်အိမ်မှာနေကျတယ်…
သူတို့နှစ်ယောက်က မျက်နှာချင်းဆိုင်အိမ်မှာတာနေကျတာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကခေါ်ပြောနှုတ်ဆက်မရှိကျဘူး
တစ်နေ့ မောင်မြစုဆောင်းထားတဲ့ရွှေထုပ်လေးကပျောက်သွားတယ် မောင်မြက မျက်နှာချင်းဆိုင်အိမ်က မောင်လှကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်
မောင်လှကတော့ သူလုပ်နေကျအတိုင်းပေါ့ သူအိမ်မှာသူအလုပ်လုပ်နေပါတယ် မောင်မြရဲ့အမြင်ကတော့ မောင်လှဟာသူ့ရဲ့ရွှေထုပ်ကိုခိုးထားလို့
ဘယ်နေရာမှာဝှက်ရမယ်ဆိုတာနေရာလိုက်ရှာနေတယ်လို့မြင်နေတယ်လေ.. ဘယ်နေ့ပဲဖြစ်ဖြစ် မောင်လှကလဲသူ့
+အလုပ်ကိုအရင်တိုင်းပဲလုပ်မြဲလုပ်တယ် မောင်မြကလဲ သူ့ရွှေထုပ်ကိုခိုးထားလို့ ၀ှက်ဖို့ကြံစည်နေတယ်လို့ပဲမြင်တာပေါ့………………..
ဒီလိုနဲ့ ….. မိုးရာသီကိုရောက်လာပါတယ်.. တစ်နေ့မှာ မောင်မြဟာသူ့အိမ်ရေတံလျှောက်မှာ မိုးယိုနေလို့ ဖာထေးဖို့ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာမထင်မှတ်ပဲ
သူ့ရဲ့ရွှေထုပ်ကို တွေ့လိုက်ရပါတယ် အမှန်တကယ်တော့ရွှေထုပ်ကိုကြွက်ချီသွားတာပါ အစာမဟုတ်မှန်းသိတော့ကြွက်က ရောက်ရာမှာပဲထားခဲ့
တယ်..အဲဒီအချိန်မှာ မောင်မြဟာ မောင်လှကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်..ဒီတစ်ခါမောင်မြကြည့်လိုက်တဲ့အကြည့်ကအရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူး
လူတိုင်းအပေါ်မှာ သံသယကင်းကင်း မြင်နိုင်ဖို့အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပါတယ်..
အားလုံးလဲ လူတိုင်းအပေါ်မှာ သံသယကင်းကင်း မြင်နိုင်ကျပါစေ………
မှတ်သားစရာပိုစ့်ကလေးပါ။ လူ့စိတ်ဆိုတာ ရှင်းရှင်းလေးနဲ့အင်မတန်ရှုပ်ပါတယ်။ အဲဒါကိုရှင်းအောင် နေဖို့ဆို တာအတော်မလွယ်ပေမဲ့ စိတ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနေနိုင်အောင်ကြိုးစားကြမယ်ဆိုရင် ရန်ပွဲတွေ ငြိမ်းသွား မှာပါ။
မှတ်သားပြီး လိုက်နာနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ့မယ် ရှင်းသန့်ရေ …လူတိုင်းလူတိုင်းသံသယ ကင်းကင်းနဲ့
မှတ်သားစရာပိုစ့်ကလေးပါ။ လူ့စိတ်ဆိုတာ ရှင်းမလိုနဲ့ရှုပ်ပါတယ်။ အဲရှုပ်တဲ့စိတ်ကို ရှင်းအောင်ကြိုးစားကြ မယ်ဆိုရင်တော့ ရန်ပွဲတွေ စစ်ပွဲတွေ နဲသွားနိုင်ပါတယ်။ အမတို့လဲ စိတ်ကိုရှင်းနိုင်အောင်တော့ကြိုးစားပေမဲ့ တခါတရံလဲမလွယ်လှပါဘူး။ [:-bd]
အီးဘယ်လိုနှစ်ခါတက်သွားလဲမသိဘူး။ ကဲ အသစ်ကလေးရေ ယူလိုက်တော့နော် ခြောက်ကျပ်။ ရက်ရက်ရောရောကိုပေးတာ။ အားမနာနဲ့သိလား။
တဂျီးရေအခုတလောကွန်မင့်တွေပျောက်ပျောက်နေတယ်။ ထပ်ထပ်မန့်တော့ ရှုပ်ကုန်ရော။
လူတိုင်းမှာ အားနည်းချက်ကိုယ်စီ ရှိကြပါရဲ့လေ
အဲဒီအားနည်းချက်တွေကိုသာ လစ်လျှူရှုပြီး နားလည်ပေးမယ်ဆိုလျှင်
ကျုပ်မှာတော့ ရွှေထုပ်မရှိလို့ …ဂလို အပူအပင် မရှိ….
အကျိရဲ့ ခွက်ဒစ်ကတ် ကို ရန်ရှာလိုသော…
တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အမြင်မကြည်တာလေးတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
အဲဒီကျ နည်းနည်းနားလည်တတ်အောင် ကြိုးစားတွေးမိလိုက်ရင်
မမရှင်းသန့်ရေ……. မှတ်သားပြီး လိုက်နာနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ့မယ်နော်။
မရှင်းသန့် ရေ အမှန်ပဲ ဗျို့ ! တယောက် ကို တယောက် ကြည့်မရ တော့ဘူးဆို ရင် ဘာတွေ လုပ်လုပ် / ပြောပြော အကောင်းမမြင်ကြတော့ဘူး ! ဒါမျိုး ကျွန်တော် လည်း မကြာ ခဏ ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ် ။ ခုနောက် ပိုင်း မှာတော့ ကိုယ့်ကို ကို သတိ လေး ထားပီး ဆင်ခြင် မိတယ် ။ အကောင်း မမြင်နိုင်တဲ့ စိတ်နဲ့ သံသယ ဟာ ပူလောင်စေတဲ့ အရာတွေပါဗျာ ! ဖတ်ရှု အားပေးပီး လိုက်နာ သွားပါ့မယ် ။
မုဒိတာပွား၍ မေတ္တာရှေ့ ရှုနိုင်ကြပါစေသောဝ်။
ရှင်းသန့် ပြောတာမှန်ပါတယ် အမြင်မကြည်လင်တဲလူနှစ်ယောက်တွေ့၇င် မျက်နှာကလွဲ သွားတာပါဘဲ တည့်တည့် မကြည်နိုင်တော့ဘူး
ကိုပေ့ ငယ်ရည်းစား ရှင်းရှင်း နဲ့ ကိုပေ ပျက်သွားခဲ့တာ ၊ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် သံသယတွေ လွန်ကဲခဲ့ကြလို့ ဘာ ။ အဲ့တုန်းကသာ အခုလို သိနေခဲ့ရင် အချစ်ကြီး ချစ်နေကြဦးမှာ ။
စာရေးတဲ့သူ တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ မန်းဂေဇက်ဟာ အကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်ကွင်းပဲ။ ကြိုးစားပြီးလေ့ကျက်။ ကိုယ်သိထားတာ.. ကိုယ့်တွေ့ကြုံခံစားရတာတွေကို စာဖတ်တဲ့သူတွေအပေါ် တကယ်သိစေချင် ကောင်းစေချင်တဲ့ စိတ်ကိုအရင်ခံပြီးရေး.. အလကားရတဲ့ နေရာဆိုပြီး ပေါ့ပေါ့ မရေးနဲ့ကြိုးစား.. ငါ့စာတွေကို အများကဖတ်နေတယ်..ဆိုပြီး စာဖတ်သူနေရာမှာဝင်ပြီး ခံစားကြည့်။
ဟဲ့.. ဟိုအညာသူရော ကြားလား။ မြင်းကောင်းခွာလိပ်နေမယ်။ ကျိုးစားထား…
ဆရာဂျီးမလုပ်ရရင် ဖျားချင်သလိုလိုဖြစ်ဖြစ်နေလို့… အဖျားပျောက်အောင်လို့ပါ။ ဟီးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
မမရှင်းသန့်နွယ်ရေး တဲ့ စာလေးကိုဖတ်ပြီး ကျနော်တစ်ခုစဉ်းစားမိပါတယ်
မောင်မြ ကသူ့ရွှေပျောက်သွား တာ မောင်လှခိုးတယ်လို့ထင်တာ မဆန်းပါဘူး မြန်စာစကားပုံအရ တော့
ဥစ္စာပျောက်ငရဲလား ဆိုသလိုပေါ့ဗျာ အဲ့ဒီမှာ မမရှင်းသန့်နွယ်ကို တစ်ခုမေးချင်ပါတယ် မမရှင်းသန့် နွယ်လည်း ပစ္စည်းတစ်ခုပျောက်ဖူးမှာပါ ဥပမာ ရွှေ ဖြစ်ဖြစ် ငွေ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာ
အဲ့ဒီလိုပျောက်တဲ့အချိန်မှာ မရှင်းသန့်နွယ်အနေနှင့် သူ့များကိုပေးလှူရတယ်လို့ ကုသိုလ်ယူဖူးလား
ဘယ်သူ့မှ အဲ့ဒီစိတ်ကို မထားဖူးဘူး လို့ထင်ပါတယ် နောက်ဆုံးမတွေ့တဲ့အဆုံးမှာမှ သူများပေးရတာ ကုသိုလ်ရတာပေါ့လို့ပြောကြမယ့် ဘယ်သူ့မှစိတ်ထဲမမပါပဲပြောကြတာပါ
“လူတစ်ယောက်ကဘယ်လောက်ပဲကောင်းတာလုပ်လုပ်ကိုယ်ကသူ့ကို အမြင်မကြည်တော့ဘူးဆိုရင် အကောင်းမမြင်နိုင်ပါဘူး” မရှင်းသန့်နွယ်ရေး တယ်နော် ဟုတ်ပါတယ် ဒါပေမယ့် မရှင်းသန့်နွယ်ရေးတာတစ်ခုကျန်နေပါသေးတယ် အမှန်တကယ် တော့ ပစ္စည်းပျောက်တဲ့သူက သူ့ကိုအရင်ကတည်းကအမြင်မကြည်တာမဟုတ်ပါဘူး သူ့ပစ္စည်းပျောက်မှသာ အဲ့ဒီလူကိုအမြင်မကြည်တာပါ ဥစ္စပျောက်ငရဲလားပေါ့ဗျာ
ကျနော်ရေးတဲ့စာထဲမှာ အမှားပါရင်လည်းခွင့်လွတ် ကြပါ
မရှင်းသန့်နွယ် ကိုခင်တဲ့ ကိုကိုသန့်
ကိုကိုသန့်ပြောသလိုပါပဲ လူတစ်ယောက်ကိုမကြည်တာကတော့ အကြောင်းရင်းတစ်ခုကြောင့်ပါ
ရှင်းသန့် လဲပစ္စည်းတွေပျောက်ဖူးပါတယ်… ဘယ်သူကိုမှတော့အမြင်မကြည်မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အဓိကတရားခံက ရှင်းသန့်ကိုယ်တိုင်ပေါ့ဆလို့ဖြစ်ရတာလေ
ရှင်းသန့်ကိုယ်တိုင်က ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ လှူလိုက်တာမဟုတ်ဘူးလေ…….သူငယ်ချင်းတွေက
ရှင်းသန့်စိတ်ကိုဖြေသိမ့်တဲ့အနေနဲ့ လှူတာလို့သဘောထားလိုက်ပါတဲ့ ပြောကြပါတယ်..
ရှင်းသန့်ကတော့လှူတာမှမဟုတ်တာ သဘောမထားနိုင်ဘူးလို့ ပြောမိတာပဲ…………….
ခုလို ရှင်းသန့်ရဲ့post မှာလိုအပ်ချက်လေးတွေကို ထောက်ပြပေးတဲ့ ကိုကိုသန့်ကိုလဲ
ကိုကိုသန့် မင်းက ဗေဒင်ဆရာလား…
မှန်နေလို့ မေးတာ မဟုတ်ဘူးနော်…
ဒီပို့စ်ရဲ့ သဘောကတော့ ဥစ္စာပျောက် ငရဲရောက် ဖြစ်နေတာပေါ့နော်…
မွန်မွန်တို့လည်း ဖြစ်ဖူးပါတယ်။ တတ်နိုင်သလောက် သတိနဲ့ နေပေမယ့်လည်း စိတ်ဆိုတာလည်း ခက်သားလားပဲ…
မမ တို့မွန်မွန်တို့အစား သတ်ပုံပြင်မယ်နော်။
-ျ= အောက်သို့ ပြုတ်ကျသည်။ အသုံးကို မကျဘူး။
ြ ကတော့ သွားကြ လာကြ လုပ်ကြ ကိုင်ကြ (အထူးသဖြင့် အတူတကွ ညွန်းတဲ့နေရာမှာသုံးပါတယ်။)
ပျောက် -ရောက် ကာရန်ကို ယူထားတာပါ။.
ဟုတ် လေးပေါက်…Forum ကို မျှော်နေတာ..မတွေ့လို့…ပို့စ်တင်ရမှာလည်း အားနာလို့…
ခုတလော အသုံးများတဲ့ အမှားတွေကို တွေ့နေရတာ..တော်ကြာ အမှန်ထင်နေမှာစိုးလို့လေ…
note pad ထဲမှာ ရေးမှတ်ထားတယ်…
ဘာပဲလုပ်လုပ် မကောင်းတာတွေပဲတွေးနေ မြင်နေဦးမှာပါပဲ..
ရှင်းသန့် ရေ..မိုက်လေး ဖတ်ကြည့်သွားပါတယ်နော်..။